Alcatel dia mampiseho ny prototype finday avo lenta ao amin'ny MWC | Androidsis
TCL dia iray amin'ireo orinasa manatrika ao amin'ny MWC 2019, ankoatry ny hafa karazana finday Alcatel vaovao. Saingy mamela anay vaovao bebe kokoa ity orinasa ity amin'ny hetsika any Barcelona. Satria efa fantatra koa fa miasa amin'ny finday avo lenta izy ireo, izay hanomboka amin'ny 2020. Ilay prototype voalohany mitovy amin'io dia efa hainay efa fantatra tany Barcelona, miaraka amin'ny anarana DragonHinge.
DragonHinge no teknolojia novolavolain'ny TCL ho an'ny finday avo lenta. Hinge izay misy fantsona maromaro ary hamela ny famolavolana telefaona mivalona isan-karazany, izay ho tonga amin'ireo hafa ho an'ny Alcatel amin'ny taona 2020. Inona no azontsika antenaina amin'ity haitao ity?
Efa nanao izany isika afaka nahita ireo prototypes vaovao nomanin'ny TCL ho an'ny Alcatel. Ka azo atao tsara ny mahatakatra tsara kokoa ny fandidiana izay hananan'ireto smartphone vaovao ho hitantsika eny an-tsena ao anatin'ny herintaona ity. Ho fanampin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny niandohan'ity teknolojia ity. Teknolojia izay efa nalain'ny orinasa patanty, ary aseho ho rafitra hafa amin'ny marika hafa amin'ny Android izy io.
1 TCL sy Alcatel miloka amin'ny finday avo lenta
2 Fa maninona no miandry hatramin'ny taona 2020 ny TCL?
TCL sy Alcatel miloka amin'ny finday avo lenta
Ity prototype izay atolotry ny orinasa antsika ity dia miaraka a Tontonana AMOLED misy habe 7,2 santimetatra misy famahana 2K + (2.048 x 1.536 teboka). CSOT, orinasa iray vondrona, no niandraikitra ny famokarana tontonana voalaza. Ho fanampin'izany, dia tokony homarihina fa ity takelaka ity dia mitana ny 90% eo alohan'ilay fitaovana. Ny tena mahaliana ary mety ny lakilen'ny DragonHinge dia afaka miondrika izy io na izany aza no tadiavinao. Zavatra manavaka azy amin'ny rafitra toa ny Galaxy Fold na ny Huawei Mate X.
TCL dia namolavola DragonHinge ho toy ny rafitra aforitra ho an'ny telefaona. Araka ny voalaza, dia hinge mamela izany mamoritra ny telefaona ivelany, anatiny, na mivalona ho azy ny telefaona, toy ny hoe smartphone finday clamshell io. Ny fahaiza-manao iray izay mampanantena fa ho manan-danja amin'ity rafitra ity, ankoatry ny fampifanarahana amin'ireo karazana toe-javatra misimisy kokoa. Izy io dia misy modules kely maromaro, izay mamela ny curvature hanana radius hialana amin'ny olana any amin'ilay faritra.
Afaka mahita fakan-tsary telo isika ao ambadiky ny telefaona, momba izay tsy ananantsika fampahalalana amin'izao fotoana izao. Amin'ireo fepetra voafaritra azontsika antenaina fa tsy misy fampahalalana, satria prototype io. Ka mandritra ny taona 2019 dia azontsika antenaina fa hiasa amin'izany ny TCL / Alcatel. Ka rehefa mandeha ny volana dia hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo isika. Toy ny amin'ny maodely mivalona hafa, izy io dia natao miaraka amina multitasking ho tanjona lehibe indrindra. Io dia hahafahan'ny mpampiasa misokatra fampiharana marobe ary hiara-miasa aminy mora foana.
Zava-dehibe izany, satria amin'ny finday avo lenta, ny fiasan'ny famolahana sy ny famelarana ny telefaona dia zavatra iray izay ho vita imbetsaka. Zavatra efa nantenain'ny TCL rehefa namolavola ity teknolojia DragonHinge ity ho an'ireo finday avo lenta. Amin'izao fotoana izao, Efa manana telefaona prototype dimy samihafa karazana izy ireo. Tsy fantatsika raha toa ka halefa daholo izy rehetra. Na dia ho tonga amin'ny taona 2020 aza ny voalohany, araka ny voalazan'ny orinasa. Azontsika atao ny mahita fa miloka amin'ny endrika samihafa izy ireo, mampiseho karazana maro be amin'ity sehatry ny finday Android azo avadika ity.
Avy amin'ny orinasa no ahitan'izy ireo ireo aforeto ny efijery ho fotoana mety. Indrindra raha ny amin'ny famolavolana endrika, izay tato ho ato dia nanjary tsy mitombina, satria ny maodelin'ny marika iray dia mitovy amin'ny an'ny marika hafa amin'ny Android. Miaraka amin'ireo fitaovana amin'ity karazana ity
Fa maninona no miandry hatramin'ny taona 2020 ny TCL?
Raha efa manana prototype izy ireo, maro no hanontany tena momba ny antony mahatonga ny TCL sy Alcatel te-hiandry amin'ny 2020. Tsy toy ny marika toa an'i Huawei na Samsung, ny orinasa dia tsy mila filàna na tanjona hametraka ny tenany ho iray amin'ireo mpitarika amin'ity sehatra ity na hametraka ny tenany ho marika premium ao. Noho izany, aleon'izy ireo miandry ny taona 2020 mandra-panombohana ity modely voalohany ity, zavatra mitovy amin'ny hataon'i LG.
Ankoatr'izay dia nilaza izany ny orinasa te hiandry izy ireo mandra-piorenan'ny teknolojia eo amin'ny tsena. Zavatra izay tsy isalasalana fa haka fotoana kely vao ho toy izany. Rehefa mandeha ny volana ary tonga ny maodely, ankoatry ny fampiharana sy ny rafitra fiomanana omanina ho azy, dia ho azon'ny mpihaino antonony atao izany. Ka te hiandry ny famoahana azy ireo izy ireo. Mba hahafahana mamaha ny olana rehetra momba ny hardware sy ny lozisialy izay manome ny traikefan'ny mpampiasa.
Araka ny nohazavaina tamin'ny TCL, ity fitaovana ity izay ho tonga amin'ny taona 2020 amin'ny alàlan'ny Alcatel, hanana vidiny ambany noho ny 1.000 Euros izy io. Marihina fa mora kokoa noho ny Galaxy Fold sy Huawei Mate X. izay vao nampidirina vao haingana. Ity vidiny ambany lavitra noho ny marika hafa ity dia iray amin'ireo antony iandrasan'izy ireo. Hatramin'ny voalohany dia lafo be daholo ireo teknolojia vaovao.
Na dia indray mandeha aza dia hatao manara-penitra ny fizotry ny famokarana, ankoatry ny olana mety hitranga ao aminy dia hidina ny vidin'ny finday aforitra amin'ny Android. Ka TCL sy Alcatel avy eo dia ho afaka hamokatra smartphone finday azo raisina miaraka amin'ny vidiny ambany, izay mora kokoa amin'ny ampahany betsaka amin'ireo mpampiasa eo amin'ny tsena. Mandritra izany fotoana izany, afa-po izahay mahita ireo prototypes ireo, mandra-pahatongan'ny modely voalohany amin'ny taona 2020 avy amin'ny Alcatel.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » TCL dia manolotra prototype finday avo lenta Alcatel ao amin'ny MWC19
santiago ramirez lopez dia hoy izy:
Wow ny atiny zarain'izy ireo foana
Mamaly amin'i santiago ramirez lopez